Fihaonana teo amin'ny Governemanta sy ny Loholona | Primature
Fihaonana teo amin’ny Governemanta sy ny Loholona
Mahazoarivo, ny 02 Jona 2020 – Toy ny natao teo anivon’ny Antenimieram-pirenena dia nampatsiahy ny lalan-tsaina sy ny drafi-pampandrosoana izay miainga amin’ny mangarahara amin’ny fomba hitantanana ny raharaham-panjakana sy ny firenena manoloana ireo Loholona androany ny Governemanta izay tarihin’ny Praiminisitra, Ntsay Christian.
Ankoatran’ny fanontaniana izay mahakasika manokana ireo ministera isan-tsokajiny izay mbola hitondran’ireo minisitra tompon’andraikitra amin’izany valiny ao anatin’ity herinandro ity, dia nifantoka tamin’ny lafiny fitantanana ny raharaham-panjakana amin’ny ankapobeny, indrindra amin’izao krizy ara-phasalamana hatrehan’ny firenena izao ny fandraisam-pitenenana nataon’ny Lehiben’ny governemanta.
Mikasika ny fitantanana, dia nampahatsiahy ireo ezaka maro efa nataon’ny Fitondram-panjakana ny tenany mialohan’ny fiatrehana ny valan’aretina Covid-19. Na dia ao anatin’ny fahamehana ara-pahasalamana aza anefa isika dia mitohy hatrany ny fanatanterahana ny drafi-pampandrosoana novinaina ary tsy maintsy asim-panitsiana izany mba ampifanarahana amin’ny toe-java-misy iainan’ny firenena amin’izao fotoana izao. Tafiditra ao anatin’izany ny « Plan Emergence Madagascar » nefa na izany aza dia efa namolavola ny “plan multi-sectoriel d’urgence” isika amin’izao fotoana izao, ahafahana mifehy ny valan’aretina sy mitondra vahaolana mahaomby miantraika avy hatrany eny anivon’ny fiarahamonina sy ny vahoaka.
Mahakasika ny fanatsarana ny sosialim-bahoaka, fa indrindra ny eo amin’ny sehatry ny fahasalamana, dia ny “changement qualitative” na ny fanatsarana ny kalitaom-pitsaboana eto Madagasikara no ezaka voalohany ataon’ny Fitondram-panjakana, tsy latsa-danja amin’izany ihany koa anefa ny sehatry ny fampianarana, ny angovo, ny fampanana rano fisotro madio, ary ny sehatra maro samihafa. Nambaran’ny Praiminisitra fa ao anatin’ny fanantanterahana ny paikady ara-pahasalamana dia “hampitoviana lenta ny Faritra rehetra amin’ny fiatrehana ity valan’aretina ity fa indrindra ny fanatsarana ny fitsaboana amin’ny ankapobeny”. Ankoatran’ireo fepetra ara-pahasalamana izay efa noraisina iatrehana manokana ny valan’aretina dia nampatsiahy ny tetik’asa entina hampitaovana sy hanatsarana ny fomba fitsaboana ny voa sy ny fo ihany koa ny tenany, hezahina ihany koa ny hanatsarana sy ny hanorenana fotodrafitr’asa ara-pahasalamana manerana ny distrika. Mikasika ny ady atao amin’ny tazomoka, izay mahavoakasika toerana maro eto Madagasikara, dia nanambara ny Lehiben’ny governemanta fa “distrika 9 no tena voakasika amin’io valan’aretina io, ary efa nandefasana fanafody ho fisorohana sy fiarovana ary fitsaboana amin’io aretina io ireo distrika ireo”.
Notsiahivin’ny Praiminisitra ihany koa ireo ezaka vitan’ny Fitondram-panjakana eo amin’ny sehatry ny fandriampahalemana. Misy ireo paikady napetraka entina andaminana ny fandriampahalemana sy filaminana eto amin’ny firenena. Voakasika izany ny ady atao amin’ny asan-dahalo, ny ady atao amin’ny zava-mahadomelina, ny ady atao amin’n fankàna an-keriny, ny ady atao amin’ny fiparitahan’ny basy sy ny fitaovam-piadiana, ary ny fametrahana ny fandriampahalemana eny anivon’ny distrika rehetra. Tsy misy intsony hoy izy ny toerana tsy tongan’ny fanjakana sy ny mpitandro ny filaminana ary nohamafisin’ny Sekreteram-panjakana miadidy ny zandarmaria, ny Minisitry ny Fiarovam-pirenena ary ny Minisitry ny Filaminana anatiny fa ny mpanao ratsy indray amin’izao no mihorohoro fa tsy ny vahoaka na ny mpitandro ny filaminana. Na dia mbola misy aza ny ezaka atao manoloana izany fandriampahalemana izany dia hita sy tsapa fa efa manomboka mipetraka ny fahefam-panjakana ankehitriny raha tsy hiteny fotsiny ny fiakaran’ny tahan’ny omby very izay efa tafaverina amin’ny tompony. Noho izany, mitohy ny fampitaovana hoy ny Praiminisitra, fa indrindra ny fametrahana rafitra vaovao eo anivon’ny mpitandro ny filaminana rehetra mba hanakaiky kokoa ny vahoaka.
Mikasika ny sehatry ny toekarena kosa dia noresahana manokana ny sehatry ny fitrandrahana ny harena an-kibon’ny tany. Notsindrian’ny Praiminisitra fa hametrahan’ny Fitondram-panjakana paikady vaovao izany, hijerena ny tombotsoa iombonana dia ny an’ny mpandraharaha manana tetikasa, ny an’ny vahoaka mipetraka ao amin’ny toerana hitrandrahana ary ny tombotsohan’ny Fitondram-panjakana. “Tsy rariny raha manana harena maro isika kanefa mbola mahantra ny firenena, ka izay no tokony hirosoana ny fanavaozana ny “code minier” eto amintsika mba hifanaraka amin’io lalan-kevitra vaovao apetraka io” hoy hatrany ny Praiminisitra.
← Tatitry ny asam-pampandrosoana ataon’ny Governemanta
Lahateny fanolorana ny tatitra mahakasika ireo fandaharan’asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny Fanjakana →
Inauguration d’un bureau dématérialisé à Ivato